Hal app, wax kasta oo lacag ah - BancaNEO
Hal app, wax walba oo lacag ah
Xalka baahi kasta
An alternative to your local bank. Enjoy a more agile and fully-digital money management
Kobcinta shaqadaada madaxbanaanida Isku xidhka BancaNEO akoonka iyo kaarka si aad profile madal madax banaan
Lacagaha smart ee dibadda. Bixi oo lacag kala bixi meel kasta oo adduunka ah
Inaad noqoto qof ajnabi ah waa sahlan tahay. Ka faa'iidayso wareejinta iyo beddelka aan sal lahayn
FURO XISAABTA QOFKA
Qaado kaarka aad maamusho
Qorshayaasha qiimaha shaqsiyeed
Kordhi wareejinta caalamiga ah SWIFT
SWIFT gaar ah koontadaada
Macaamilada 38 lacagood
In ka badan 100 waddan ayaa taageeray
No ajuurada qarsoon
Lacagtaada wax badan uga soo saar wax ka yar kharashka qaxwada.
Furitaanka akoonnada bilaashka ah (ee EU degane)
IOS iyo Android App: Ku bixi adiga oo isticmaalaya taleefankaaga
€ 4,99	Kharashka Dayactirka
Hel Akawnkaaga Heerka NEO
Kor u qaad qaab nololeedka caalamiga ah ee NEO Plus oo hel kalsoonida aad ku qarashgareyso.
Dhammaan sifooyinka NEO Standard
€ 9,99	Kharashka Dayactirka
Hel Koontadaada NEO Plus
Dhammaan sifooyinka NEO Plus
€ 14,99 Kharashka Dayactirka
Hel Koontadaada Smart NEO
Waxaan u hoggaansanahay heerarka amniga EMI ee ugu sarreeya si aan lacagtaada iyo xogtaada shakhsi ahaaneed u ilaalino. Lacagta macmiilka waxa lagu kaydiyaa akoon gooni ah oo leh Bangiga Qaranka ee Lithuania.